Ku taqasuska Hoggaanka guud
Ku taqasuska Hoggaanka guud (Public Admin)
Taqasuska Hoggaanka guud wuxuu ardayga u diyaariyaa inuu ka mid noqdo hoggaanka fulinta ee dowlada hoose, dowlad goboleedka ama dowlada dhexe.
Waxbarashada taqasuskaan waxaa loo qaabeeyay in diirada lagu saaro nidaamyada laamaha fulinta ku shaqeeyaan iyo maamulida laamahaas.
Wax yaabaha kaloo lagu barato taqasuskaan waxaa ka mid ah doorka uu ku lee yahay Hoggaanka guud bulshada, mabaadii'da hagta iyo sidii loo hormarin lahaa Hoggaanka guud, sidoo kale waxaa lagu bartaa maamulida siyaasada guud, la dhaqanka laamaha sharci-dejinta, habka loo diyaariyo miisaaniyadda dowlada, sharciyada maamulka hay’adaha iyo anshaxa shaqada.
Arday noocee ku taqasusa Hoggaanka guud (Public Administration)
Arday ku han weyn inuu shaqo ka helo Dowlada, Qaramada midoobe ama Hay’adaha kheyriga, jecelna inuu caawiyo bulshada.
Ardayga baranaayo taqasuskaan waa inuu ku fiican yahay gorfaynta, la xiriirka bulshada, abaabulka bulshada iyo waan waanta.
Taqasuskaan wuxuu diirada saaraa adeega bulshada, ardayga baranaayo Hoggaanka guud hadaf kiisa nolosha waa inuu caawiyo dadweynaha.
Ardayga barta taqasuska Hoggaanka guud wuxuu jago ka qaban karaa:
Dhaqaale aruuriye hay’ad kheyri
Dowlada Hoose fulinteeda
Hay’adaha aan dowliga aheen
Maamulka dowlad Goboleedka
Wasaaradaha dowlada Dhexe
Xubin golaha sharci dajinta
Alinor Ahmed Hubiye
11/12/2017 02:32:13 pm
Thank you, mudanayaal waxaan aad u jeclahay Facultigan lkn waxàan kasii jeclahay inaan helo "Diploma of Public Administration"
Marka ma ka heli karayaa jaamacadda Indian Ocean Diploma?